I-Getaway by the Bay....indawo ethokomele engu-1BR yokubalekela edolobheni laseMunising - I-Airbnb
I-Getaway by the Bay....indawo ethokomele engu-1BR yokubalekela edolobheni laseMunising
Munising, Michigan, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Amber
U-Amber Ungumbungazi ovelele
Isimanje, elula.. amathoni athambile ampunga kulo lonke. Kupendwe kabusha. Wonke amasofa amasha, imibhede, amathawula, imicamelo, izinto zokupheka, izitsha, njll. I-Munising ithule ebusuku ngakho uqinisekisiwe ukulala kahle ebusuku.
Eduze nezindawo eziningi zokudla njengeDeli yethu engezansi (i-Driftwood Deli), i-Taco Primo, i-EJ's Dine noma i-Dash, i-Pictured Rocks Pizza kanye ne-Main Street Pizza. Ukuhamba kalula ukuya endaweni yedolobha kanye ne-Pictured Rocks Boat Cruises. Ungabona ngokoqobo idokhi efasiteleni lasekhishini. Vele uwele uM-28 usulapho! Futhi uhambo olulula oluya e-ByGeorge Brewing (phansi nje kwezitebhisi 🍻) i-East Channel Brewery kanye ne-South Bay Outfitters ukuze uqashe amabhayisikili.
4.88 · 305 okushiwo abanye
Ku-❤️ yedolobha laseMunising. Ibanga lokuhamba elilula ukuya endaweni yasedolobheni, izindawo zokudla zasendaweni, nendawo yotshwala. I-Munising isango eliya e-Pictured Rocks. Kunamakhilomitha amabhishi nemizila. Siyathanda ukuhlala lapha ukuze sizihambele ngaphandle phakathi kwalo mphakathi onobungane. ILake Superior iwugu olusha futhi sicabanga ukuthi uzovuma.
Lesi sikhala singaphezu kweDeli/brewery yethu. Yekela phansi uthi sawubona uma ufisa 😊
Hlola ezinye izinketho ezise- Munising namaphethelo